I-Twitterrific ihlaziywa ukuze ihambelane ne-iPhone X kwaye yongeza umxholo omnyama | IPhone iindaba
I-Twitterrific ihlaziywa ukuze ihambelane ne-iPhone X kwaye yongeza umxholo omnyama
Enye yezona zinto ziphambili abasebenzisi ababezilindele kakhulu kukuba iApple yayiza kuphumeza iiphaneli zetekhnoloji ye-LED kube kanye, itekhnoloji eyenziwe yiSamsung kule minyaka idlulileyo kwaye ngoku iyenze eyona mveliso ibalaseleyo kwihlabathi lolu hlobo lwepaneli, ethi uye wanyanzela I-Apple ixhomekeke kolona tshaba lwayo lukhulu ekwenzeni i-iPhone X kwesikrini.
Izikrini ze-LED zisebenzisa kuphela iipikseli xa umbala wazo ungekho mnyama, oko kukuthi, ukuba umbala ekufuneka ubonisiwe wahlukile kumbala omnyama uyakhanyisa, ke ukusetyenziswa kwebhetri akufani naxa kufuneka kukhanyise konke ukubonisa njengakwiphaneli zemveli ze-LCD . Ukusetyenziswa kolu hlobo lwescreen kwi-iPhone X kubangele iliza lohlaziyo losetyenziso olunikezela ngomxholo omnyama, othi Thatha ithuba kule teknoloji ikhokelela ekusebenziseni ibhetri.
Isicelo samva nje sokungena kwi-hoop, oko kukuthi, yi-Twitterrific, umxhasi we-Twitter okhoyo kwiVenkile yeApple eza kwisithunzi se-Tweetbot, kodwa ngaphandle kokuqalisa uhlaziyo rhoqo kwiminyaka embalwa eyenza ukuba abasebenzisi bahlawule. uyithengile. Njengoko bekulindelwe, i-Twiterrific isebenzise olu hlaziyo ukongeza ukungqinelana nefomathi entsha yesikrini ye-iPhone X, ukwenza uninzi lwesikrini ngelixa uthintela inotshi.
Ikwaphehlelele inkqubo yokufumanisa uphando ukwenza ukuba kube lula ukufikelela kuzo ngaphandle kokubona iinkcukacha zetweet nganye. Uyilo lwe-interface luye lwatshintshwa kancinci ukubonelela ngemilo egudileyo, kunye nenani leefonti ezikhoyo Yenza ngokwezifiso umboniso wexesha lethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Twitterrific ihlaziywa ukuze ihambelane ne-iPhone X kwaye yongeza umxholo omnyama
Molo, umntu uyazi ukuba angayibona njani i-tt ngokwelizwe.
Kuba kule ndiyibonayo ibonisa kuphela i-tt ngokwendawo.
Ukudlala umculo kuGoogle kuhlaziywa ukuxhasa i-iPhone X entsha
I-Asphalt 8: Uhlaziyo oluqhutywa ngumoya ngeZithuthi ezinamavili ashushu amatsha kunye nokuhambelana kwe-iPhone X